नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को बारेमा लेख्नुहोस् ।
नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, तथा समष्टिगत आर्थिक, विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइयो । सरकारले यस कार्यक्रमबाट १० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य राखेको थियो । “पर्यटनका लागि संगसंगै” नारा लिएर सन् २०११ जनवरी १४ मा उद्घाटित यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ७ लाख पर्यटक आएको अनुमान छ । नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न खगेन्द्र थापा मगर, सदीक्षा श्रेष्ठ र प्रशान्त तामाङ्गलाई सद्भावना दुतको रूपमा नियुक्ति गरेको थियो ।
1 क्षेत्रफलका आधारमा विश्वका ५ ठूला र साना मुलुकहरु
4 नेपाल सरकारले हालै खरिद/विक्री गर्ने विदेशी मुद्रा
6 साईवर युद्ध भनेको के हो ?
7 Nuclear Winter (आणविक हिउँद) भनेको के हो ?
8 Carbon Trade